Athini Amaphiko Ecebo Lakho Lokumaketha? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 1, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo, ngiqale ukufunda incwadi kaNick Carter Imizuzwana eyishumi nambili: Phakamisa Izidingo Zebhizinisi Lakho. Ngiyakuthanda ukufaniswa kwebhizinisi njengokundiza okusencwadini futhi uNick ukusichaza kahle.
Enye yezingxoxo zokuqala ngukuthi Phakamisa. INASA ichaza ilifti njengokulandelayo:
Lift ngamandla aphikisana ngqo nesisindo sendiza futhi aphethe indiza emoyeni. Ukuphakamisa kwenziwa yizo zonke izingxenye zendiza, kepha iningi lokuphakanyiswa endizeni evamile lenziwa ngamaphiko. I-Lift ingamandla e-aerodynamic akhiqizwa ukunyakaza kwendiza emoyeni. Ngoba i-lift ingamandla, ingubuningi bevektha, obunobukhulu nesiqondiso esihambisana nayo. I-Lift isebenza maphakathi nengcindezi yento futhi iqondiswe ngokuya kusiqondisi sokugeleza.
Izolo kusihlwa, omunye umnikazi webhizinisi nami siphuze iziphuzo futhi besidingida amandla nokugxila ebesinakho namabhizinisi ethu. Womabili amabhizinisi ethu enza kahle, kepha kuthathwe imali enhle kakhulu kithi. Angicabangi ukuthi kukhona umuntu obonayo, aze aqale ibhizinisi, ukuthi lidingani. Ukusuka ekungeneni ekulondolozeni, ukuya ekucindezelweni mayelana nokugeleza kwemali, izingqinamba zabasebenzi, ukuthengisa, ukubalwa kwezimali kanye nentela… abantu abaqapheli ukuthi ngesikhathi lapho sisebenza khona kumakhasimende ethu kudinga amandla onke okugcina.
Kufanele songe amandla ngangokunokwenzeka ukuze sihlale sinezinjini ezisebenzayo futhi nebhizinisi linakho Phakamisa. Izingxabano nezinkinga azikwazi ukudonswa ngaphandle ngoba lokho kuchitha amandla amaningi kakhulu kunalokho esikwazi ukukukhokhela. Cabanga ngendiza lapho usebenzise khona uphethiloli omningi kakhulu ukufika lapho uya khona… uzoshayisa. Ngenxa yalokhu, nginqume kakhulu futhi ngishesha ngezimpendulo nangezenzo kunangesikhathi esedlule.
Phakamisa yisici esiyisisekelo sayo yonke indiza nendiza endizayo. Njengoba ngibheka ibhizinisi lami, i Phakamisa of Highbridge ngokungangabazeki, le bhulogi. Ukusungulwa kwale bhulogi kuholele kuzithameli zethu, incwadi yami, ukuzibandakanya kwami ​​nokukhuluma, umsebenzi wami namafemu okuzibandakanya nezinkampani zobuchwepheshe emhlabeni jikelele, nokuqashwa kwabasebenzi bethu nomsebenzi wethu oqhubekayo. Ukube bekukhona amaphiko ebhizinisini lami, bebezoba yile bhulogi.
Ngakho-ke, noma ngabe usuku ngimbi kangakanani, ngisebenzise amandla amangakanani, umthwalo wami wokusebenza unjani, imali engakanani ebhange nokuthi yiziphi izingqinamba zeklayenti esingaba nazo, ngiqinisekisa njalo ukuthi ibhizinisi lami Phakamisa. Ngiyazi kuneminye imininingwane eminingi ngendiza okufanele ngiyinake (futhi incwadi kaNick iyangisiza ukugxila kulokho), kepha angisoze ngikhohlwa isisekelo sawo wonke umsebenzi wethu - le bhulogi. Le bhulogi isivumele ukuba sindiza futhi izosiletha nomaphi lapho sifuna ukuya khona. Kumele ngiqinisekise ukuthi ngigcina izinjini zayo zisebenza futhi ngiqhubeke nokusigcina sikhuphuka.
Ayini amaphiko ebhizinisi lakho?
Kungani ngiwazonda ama-akhawunti aqinisekisiwe
UJun 3, 2013 ngo-9: 29 AM
Ngiyabonga. ilusizo kimi